VaMnangagwa Vodoma Komisheni Ichaferefeta Nyaya yeKupfurwa kweVanhu neMauto muHarare
Mumwe munhu achitiza mauto pamhirizhonga iyi
Mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemusi weChitatu vakaadoma makomishina manomwe kuti aongorore mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa VaKgalema Motlanthe ndivo vanenge vari sachigaro wekomisheni iyi. Vamwe vakadomwa vanosanganisa VaRodney Dixon QC vekuUnited Kingdom, Chief Emeka Anyaouku vaimbove munyori muCommonwealth vachibva kuNigeria nevaimbotungamirira mauto kuTanzania General Davis Mwamunyange.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri mukomishini iyi zvinoti Muzvinafundo Charity Manyeruke vanovazve mhengo yeZanu-PF, Muzvinafundo Lovemore Madhuku mutungamiri webato reNCA uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe uye Amai Vimbai Nyemba vaimbove mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe.
VaMnangagwa vakaudza vatori venhau kuti komisheni iyi ichatsvagurudza nekuongorora kuti ndivanani vakakonzera mhirizhonga.
VaMnangagwa vakatiwo komishini iyi ichatarisawo kuti chii chakaitwa nemapurisa uye zvii zvakazoita kuti masoja apindire pamhirizhonga iyi uye kuti maitiro avo anga akakodzera here pane zvaiitika.
VaMnangagwa vati komishini iyi inofanirwa kuvaturira zvainenge vawana mushure memwedzi mitatu kubva pavenenge vagadzwa zviripamutemo.
VaMnangagwa vati vachadzoka vachigadza makomishina aya vabva kumusangano weForum on China-Africa Cooperation kuChina.
Nyaya yaPatricia Mudadigwa Yataverengerwa naTanonoka Whande
Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu re International Commission of Jurists VaArnold Tsunga vanoti komisheni iyi kupedzera hoko padehwe retsindi nekuti vanhu vakapfura vanhu vanozivikanwa vangadai vakasungwa.